Shame Room - Love Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Efatra mahamenatra Average 5 / 5 avy amin'ny 1
N / A, manana fomba fijery 26.3K
Wooyeon sy i Se-myung mpiorina aminy taloha no nalaina an-keriny. Nifoha tamin'ny Shame Room izy ireo, izay tsy maintsy hamita iraka mahamenatra mba hahafahany handositra. Rehefa mandeha ny zotram-pitiavana sy mitsentsitra ary mitsentsitra ary manosika azy ireo handeha amin'ny iraka olon-tsy fantatra sy mamitaka bebe kokoa, ahoana ny halavin'izy ireo? Hahazo ny tsara ho azy ireo ve ny fanirian'izy ireo? Ary hivoaka ve izy ireo?
Umareru Kachi No Nakatta Jibun Ga Anna No Tame Ni Dekiru Ikutsuka Tsy Koto